Thwebula Skype 7.22.0.322 – Android – Vessoft
Skype – isofthiwe ukuxhumana phakathi kwabasebenzisi the internet. Isofthiwe ikuvumela ukuba wenze Voice namakholi wevidiyo, exchange imiyalezo futhi Ukuthumela amavidyo noma isithombe imiyalezo. Skype kwenza ukwakha ngqungquthela inqwaba abasebenzisi, uxhumana nabo futhi wabelane amafayela. Isofthiwe lusenza ukushaya izingcingo ku-Mobiles futhi ninalo phones emhlabeni wonke ngamazinga aphansi. Skype iqukethe iqoqo amathuluzi enikeza ikhono ngezifiso isofthiwe izidingo umsebenzisi.
Voice and video ukuxhumana
Ukukwazi ukuqamba conference
Amathuba Wide of ukumisa
English, Українська, Français, Italiano... Bona software xaxa